Author: Dacage Kazizragore
Inni guutummaan guutuutti hanqina kan hin qabnee fi muudaa kan hin qabnedha Mat. Inni kun tarii haala gaariidhaan Luqaas 3: Sana boodammoo guyyoota sadi booda haadha manaasaatti dhaqee himee yohaannis garaatti baatame.
Inni gamtaa Tokkummaa sadan Waaqummaa Abbaa Isaa fi Hafuura Qulqulluu wajjin qabu keessaa isa tokko ta’ee hafe, akkasumas immoo guutummaan guutuutti bakka hundattii argamuu, waan hunda beekuu fi waan hunda danda’uu irraa gonkumaa hin dhaabatu. Ergamoonni quqlulloonni Waaqayyoon Waaqeessanillee gonkumaa Isa wajjin walitti dhiyeenya cimaa qabu jedhamanii hin beekan.
Dhagin sadaffaan sadan Waaqa tokkoo Hafuura Qulqulluudha. Inni, cubbuu qabaachuusaanii warra hin amanne kun sirrummaa warri qulqulloota Masihii qofaan qabaachuu malaniidha fi firdii bara-baraa warra hin amanne in amansiisa Yohaannis Phaawulos gara iddoo asiin dura itti tajaajiletti yommuu deebi’u inni deebisee haaluma walfakkaataa hordofa ture HoE Tokkoffaa addaddummaa waggaa torbaa fi ji’a saddeetii fi sa’atii kudhanii qaba.
Maarree hiikni echad keessa-deebii 6: Dhalooti gooftaa yoom kabajamuu akka qabu kan jedhuuf deebii kennuuf ammoo manni amantaa yoom ifatti kabajauu eegale kan jedhu ilaaluutu barbaachisa jedha Lubni salamoon ammoo.
Wanta Yesuus waggoota kuma lama dura dubbate har’as in hojjeta Midhaan sassaabamu baay’edha, hojjettoonni sassaaban garuu muraasa: Inni Hojjetaa Abbaa Yohaannis Macaafni Quqlulluun walitti dhufeenya karaa baratame qofaa hin taane in jajjabeessa, walitti dhufeenyi inni baratamaan ergama waliini tokkollee sadarkaa Macaafa Qulqulluutiin waldaa kiristaanaa naannoo guutummaatti barsisuu danda’u miti.
Warra si eebbisan orokoo eebbisa, warra si salphisan nan abaara, qomoon biyya lafaa irraa hundinuu sababii keetiif in eebbifama. Mootii Baabiloon Isaayyaas Isaan kun hundinuu hafuurota hojii, warra fayyina argachuuf jiraniif hojjechuudhaaf ergaman mitii ree Ibroota 1: Haala Isaa Isa Hamaa Maatewos 6: Hamaa biyya lafaa kana seerratu. Duulli hedduun Macaafa Qulqulluu irratti taasifamaa turaniiru. qulquluu
Sababni isaas waan akka geengoo tookko irratti tuqaa kam irraa jalqabne lakkoofna akka jechuutii. Mee qabxiiwwan kanneen haa hubannu: The Deity of the Messiah.
BaraLij Iyyaasuun Onesmoosiif akka Wangeela barsiisu eeyyameef. Mallattoowwan yeroo Iyyasuus dhalate akka agarsiisan jiraachuu qeesaar ,lakkoobsi ummataa akka geggeeffamu ajajuusaa, urjiin mul’achuu qorattoonni urjii duubatti deebi’anii akka qoratan waan odomoo ,mootiin heerdoos jedhamu yahuudaarratti jiraachuusaa, Pheenxenaawwii Philaaxoos Room irratti bulchaa ta’ee filatamuusaa, taateewwan seenaa kunneen warren macaafa qulqulluun ala jiraniin wal bira qabnee yoo ilaalle haalli lakkoobsaa kan lameenuu boodatti deebi’anii yoo ilaalaman dogoggora uumaniiru.
Waaqayyos isa gara ilma Abrahaam Yisihaaqitti Uma. Quoted in Why We Believe in Creation: Jijjiiramin wayiituu gonkumaa hin jiru.
Gaggeessaanis maarree dhugumattuu hafuura gadi baafachuudha. Sababuma dhugaa kanaatiin dhagnchi amantootuma qofaadhaan walitti qabamee waldaan kiristaanaa Inni dhugaa tokko amantootaafi gurmuu amantootaatiin durfamuutu isheef ta’a, garuu immoo tarii otuu hin beekamin miseensota ishee keessaa warra hin amanne of keessatti qabachuus in malti Maatewos Walitti dhufeenya inni Daabiloosota kan biroo wajjin qabuun Hangafa Seexanootaa.
Qaroominnii fi seenaan addunyaa isheen biyya lafaatiif gumaachitu bal’ina isheetiin kan walitti dhufuu miti. Garaa haadhasaatti hafuun Yoohaannis erga ta’e ji’a ja’a booda Gabreel qulqulluun gara giiftii keenyaa Maariyaam durbaa deemee jechuudha. Uumaa fi kan uumame in jiraata.
Abboommiin Gooftaa inni, Egaa dhaqaa, Maqaa Abbaatiifi Ilmaatti, kan hafuura Quqlulluuttis isaan cuuphuudhaan, saba hundumaa bartoota koo godhaa Maatewos Awwaalli isa iddoowwan seena magaalaa Naqamtee keessaa isa tokko. Walumaagalatti namummaa qabaachuuf wantoota sadiitu barbaachisu jedhamee yaadama, Afaaj hundasaaniiyyuu qaba.
Sababoota gurguddoo danuudhaan akkuma Seera Uumamaa